बिर्सिएका पुस्तकहरूको कब्रिस्तान: Zafón को मास्टरपीस वर्तमान साहित्य
बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहान
जुआन अर्टिज | | किताबहरु, साहित्य, नोभेला
बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहान यो बार्सिलोनाका कार्लोस रुइज जाफानद्वारा लेखिएको टेट्रालोजी हो। यो श्रृंखला लेखकको उत्कृष्ट कृति हो, जुन २१ औं शताब्दीको स्पेनिश साहित्यमा सम्पादकीय घटना भयो। लेखकले चार सुसंगठित र स्वायत्त कथाहरू सिर्जना गरे, प्रत्येकको आफ्नै सारको साथ, तर अन्ततः सँगै जोडिए।
भूखंडहरू विभिन्न रहस्यका माध्यम बाट जान्छन् जुन सेम्प्रे परिवार र यसको पुस्तक पसलको तीन पिढिहरू हो। थप रूपमा, प्रत्येक उपन्यासको विकासमा रहस्यमय पुस्तक समावेश हुन्छ जुन कथाको गति सेट गर्दछ। सबै कुरा अविस्मरणीय पात्रहरूले पूरक हुन्छन् जुन लेखकद्वारा बनाइएको मिथ्या र रहस्यको भूलभुलैयालाई समृद्ध बनाउँदछ।
1 टेट्रालोजी बिर्सिएका पुस्तकहरूको कब्रिस्तान
1.1 हावाको छाया (२००१)
1.2 द एन्जिल गेम (२०० 2008)
1.3 स्वर्गको कैदी (२०११)
1.4 आत्माहरूको भूलभुलैया (२०१ 2016)
टेट्रालोजी बिर्सिएका पुस्तकहरूको कब्रिस्तान
र 2001, Ruiz Zafón ले सस्पेंस उपन्यासहरूको यो श्रृंखला सुरू गर्‍यो, जसको जादूको सफल डेलिभरीबाट शुरू भयो हावाको छाया। पुस्तकले तुरुन्तै लाखौं पाठकहरूलाई जित्यो: "zafonmanía" को रूपमा परिचित घटनाको सुरूवात गरेर। यो पहिलो किस्तमा, नायक र उनको बुबाले रहस्यमय र अविश्वसनीय ठाउँको ढोका खोले: बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहान।
त्यसपछि २०० 2008 मा लेखक प्रस्तुत गरियो परीको खेल, एक काम जसले स्पेनमा आफ्नो प्रेसको एक रेकर्ड तोड्यो, एक मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू। तीन वर्ष पछि, स्वर्गको कैदी (२०११) संग्रहमा सामेल भयो. 2016 मा अन्तिम अध्यायको साथ आउनेछ आत्माहरूको भूलभुलैया। यो भर्खरको उपन्यासमा, लेखकले सागा बनाउँदा प्रस्तुत गर्ने पज्जलका सबै टुक्राहरू सँगै फिट हुन्छन्।
टेट्रालोजी केस ला ...
प्रस्ताव हेर्नुहोस् सुविधाहरू हेर्नुहोस्
हावाको छाया (2001)
यो गथिक रहस्य र कथा उपन्यास हो, जससँग लेखकले प्रशंसित श्रृंखला खोल्छ। कथा बार्सिलोना शहर मा १ 1945 XNUMX from देखि देखिन्छ, र यसको मुख्य पात्र डानियल Sempere हो। यस युवकको जीवन परिवर्तन भएको छ, जब आफ्ना बुवालाई धन्यवाद दिई, उसले बिर्सिएको पुस्तकहरूको कब्रिस्तानलाई भेट्छ र पाठ छनौट गर्ने निर्णय गर्छ हावाको छायाजुलियन काराक्स द्वारा।
कथाद्वारा मोहित - र क्यारेक्सको बारेमा थप पढ्न चाहान्छ -, डेनियल एक अनुसन्धान शुरू गर्दछ जुन उसको नयाँ साथी फर्मन सामिल हुन्छ। खोजीले तिनीहरूलाई अविशंकित मार्गहरूमा तल डो .्याउँछ, र उनीहरू अघि बढ्दै तिनीहरू लेखकबाट रोचक डेटा भेट्छन्। यिनीहरूमध्ये, पेनेलोप अल्दायाको साथ अध्यारो भाग देखा पर्‍यो, जसले गर्दा यो मान्छे अँध्यारो र एक्लो व्यक्ति बन्न पुग्यो।
जब तपाईले सोधपुछ जारी राख्नु भएको छ, युवाहरूको जीवन खतरामा हुन थाल्छ. तर, केहि पनि निन्दनीय डानियल र उनको विश्वासी साथी, जो को वृत्ति रोक्दैन तिनीहरू आराम गर्दैनन् जब सम्म तिनीहरूले Julán वरपरको सबै रहस्य स्पष्ट पार्छन्। यसैले वास्तविकता र कल्पनाले घेरिएको योजनालाई ईन्स र बहिष्कार, हत्या, निषेधित रोमान्स र camaraderie को साथ पास गर्दछ।
हावाको छाया ...
परीको खेल (2008)
यो एक रहस्यमय छ डरलाग्दा उपन्यास त्यो २० औं दशकको बार्सिलोनामा लिइएको हो। यो रोचक कथा यसका मुख्य पात्र लेखक डेभिड मार्टनको रूपमा छ। यस अवसरमा, रुइज जाफानले पहिलो पुस्तकबाट फरक पर्ट बनायो, तर बाक्लो र राम्रोसँग फ्रेम गरिएको कथाको साथ जसले पाठकलाई जादू र सस्पेन्समा डुबाउँछ।
डेभिडलाई सम्झेर यो षड्यंत्र भएको थियो उनको दुखद बचपन, सम्झना गर्दा उनको कामको सफलता दमन भएको शहर, जुन उनले एउटा प्रसिद्ध बार्सिलोना अखबारमा प्रकाशित गरे। नायकले वर्णन गर्दछ कि त्यो मान्यता प्राप्त गरेपछि ऊ परित्याग गरिएको हवेलीमा जान्छ र क्रिस्टीना (उनको पागलपन) लाई भेट्नुहोस्)। यस नयाँ स्थानमा, उनले अरू लेखहरू लेखे - आफ्नै किताबसहित, आफ्नो जीवन निर्देशित गर्ने निर्णय गरे र यस सुन्दर युवतीसँग विवाह गर्ने निर्णय गरे।
तर,, विभिन्न निराशाको कारण, योजना अनुसार केहि हुँदैन। निराशाहरु मध्ये, एक क्रिटिनाको अर्को व्यक्तिको साथ छ। साथै, उसको नयाँ पुस्तक फियास्को हो, yचोटपटकमा अपमान थप्न, उसले त्यो सिक्छ गम्भीर स्वास्थ्य समस्या छ.
तपाईंको डिप्रेसनको समयमा, डेभिडलाई Andreas Corelli द्वारा सम्पर्क गरिएको छ, एक रहस्यमय चरित्र के तपाईंलाई प्रदान गर्दछ को एक ठूलो राशि पैसा र यसको उपचार बदले एउटा किताब लेख नयाँ धार्मिक शिक्षामा। त्यस क्षणदेखि, डरलाग्दो घटनाहरूको विचित्रले लेखकको जीवनलाई असर गर्छ।
नयाँ दुर्भाग्यताहरूको बीचमा, मार्टनले अनुसन्धान गर्न थाल्छ, किनकि उनी भन्छन कि सबै खराबी अँध्यारो पाठको आयोगसँग सम्बन्धित छ। धेरै व्यक्तिहरू यस मार्गमा हस्तक्षेप गर्नेछन्, जस्तै पुस्तक विक्रेता सेम्पेयर र उनका अन्तरदृष्टि सहायक इसाबेला। सबै घटनाहरूले पुस्तकलाई डेभिड पुर्‍याउँछन् लक्स अटर्नापुरानो हवेलीको मालिक, जहाँ उहाँ बस्नुहुन्छ, मिस्टर मार्लास्का द्वारा लिखित.
एन्जिल खेल / The ...
स्वर्गको कैदी (2011)
यो सस्पेंस र षडयन्त्रले भरिएको कथा हो जसमा कथाका मुख्य पात्रहरू फेरि फर्केर जान्छन्, जस्तै: डेनियल सेम्पेयर, फर्मेन रोमेरो डे टोरेस, डेभिड मार्टन र इसाबेला गिस्पर्ट। थप रूपमा, लेखकले केही अज्ञातहरू प्रकट गर्दछ जुन पाठकहरूलाई पहिले अनिश्चित बनाएको थियो।
धेरै वर्ष बित्यो, डेनियल एक गठन गरेको छ आफ्नी श्रीमती बी र सानो जुलियनको साथ परिवार। अहिले आफ्नो बुबा र सँगै काम गर्दछ उसको साथी फर्मिन (मुख्य चरित्र प्लट) परिवार पुस्तक पसल मा: Sempere र बच्चाहरु। ठाउँ यसको उत्तम मा छैन, तसर्थ, एक महँगो किताब मा धेरै चासो लिने ग्राहक देखा पर्दा डानियल उत्साहित हुन्छन्: मोन्टे क्रिस्टोको गणना.
यद्यपि, यो उत्साहजनक व्यक्ति चाँडै नै बेचैन भयो किनकि त्यो पापी मान्छेले पुस्तक लिन्छ र एउटा नोट राख्छ: "फरमेन रोमेरो डे टोरेसको लागि, जो मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो र भविष्यको साँचो हुनुहुन्छ।" एक पटक यो बिरानो मानिस हिडेपछि डेनियल आफ्नो साथीलाई के भयो उसलाई बताउन गए। कारण, फर्मेनले उनीहरूलाई आफ्नो विगतको बारेमा बताउँछ र एउटा डरलाग्दो गोप्य कुरा प्रकट गर्दछ।
त्यतिखेर, कथा वर्षौं पछाडि सर्छ, जब Fermín युग मोन्टजिकको सैनिक किल्लामा कैदी y डेभिड मार्टनलाई भेट्नुहोस्। त्यो स्थानमा मौरिसियो वाल्स - उद्यम निर्देशक र एक अजीब लेखक छ, जसले मार्टेनलाई धम्की दिन्छ र उसको सीप प्रयोग गर्दछ। त्यहाँबाट फर्मन र डेभिडबीचको मित्रताको जन्म भयो र पछि आउनेवालाले डेनियल सेम्प्रेलाई सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण काम अह्रायो।
स्वर्गको कैदी ...
आत्माहरूको भूलभुलैया (2016)
यो वितरण हो जुन ब्रह्माण्डको वरिपरि उपन्यासहरूको चक्र बन्द हुन्छ बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहान। यस सम्बन्धमा, रुइज जाफिनले भने: "... यो अन्तिम मेरो मनपर्ने हो, सायद यो किनभने यो एक फीताको टुक्रा हो।, जसले ती सबै तत्वहरू थप्दछ जुन अघिल्लोमा हुर्काइएको थियो "। र वास्तवमा यो सम्पूर्ण गाथामा सब भन्दा लामो र सबै भन्दा पूरै पुस्तक हो, सबैमा pages ०० पृष्ठहरू छन्।
एलिस ग्रे उनी २० औं वर्षकी एउटी महिला हुन् जसले आफ्नो बाल्यावस्था, र कसरी सम्झनाउँदछन् बचे को भयानक आक्रमण स्पेनिश नागरिक युद्ध। यो १ 1958 XNUMX हो, र यो दुस्साहसी युवती म्याड्रिडको गुप्त पुलिसको खोजीकर्ता भएको एक दशक पछि आफ्नो जागिरबाट अवकाश लिन चाहन्छिन। तर पहिले हुनु पर्छ एउटा अन्तिम कार्य गर्नुहोस्: सोधपुछ गर्नु मौरिसियो भोल्स बेपत्ता पारिएकोमा, फ्रान्को सरकारको एक मंत्री।
एलिसियाले उनको सहयोगी क्याप्टेन भेगाससँगै खोजी शुरू गर्छिन्। बेपत्ता भएको कार्यालयको जाँच गर्दा तिनीहरूले भेक्टर मटाइक्स द्वारा लेखिएको किताब भेट्टाए। चाँडै, तिनीहरू यसलाई भोल्टले मोन्टजिक स्थल निर्देशित गर्ने समयसँग सम्बद्ध गरे जहाँ त्यस लेखकलगायत केही लेखकहरू जेलमा थिए। एजेन्टहरूले यस ट्र्याकको ट्रेल पछ्याउँछन् र बार्सिलोना जान्छन् धेरै पुस्तक विक्रेताहरूको छानबिन गर्न, जसमध्ये जुआन सेम्प्रे छन्।
एलिसिया अनुसन्धानमा अगाडि बढ्दै जाँदा उनले झुठो कुरा, अपहरण र अपराधहरूको पत्ता लगाउँछिन् द्वारा फ्रान्को शासन को। भ्रष्टाचारको त्यो बण्डलमा प्रवेश गरेपछि तिनीहरू ठूलो खतराको सिकार हुन्छन्, तर तिनीहरू लुक्नको लागि व्यवस्थापन गर्छन्। एलिसियालाई महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको समर्थन थियो भन्ने तथ्यलाई सबै धन्यवाद छ, जसमा डानियल र फर्मेन बाहिर छन्। युवा जुलियन सेम्प्रेले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, वास्तवमा उनी कथाको नतीजामा महत्वपूर्ण थिए।
को भूलभुलैया ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहान
समुद्री पुस्तकको क्याथेड्रल
व्लादिमीर मयाकोभस्की। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। कविताहरु